မြင်းမိုရ်ဦး: ကလေးကြီးသွားများ ကြိုဖာထေးထားပေးကြစို့လား။
image from cosmeticwhitesmiles.co.uk
သွားပိုးလည်းမစားဘဲနဲ့သွားဖာရမယ်တဲ့..ဒီဆရာဝန်ဘော်ချက်ပြီ..လို့တွေးနေကြမလားမသိဘူးနော်။ အကြောင်းကဒီလိုပါ။ အရင်ပို့စ်တွေမှာကျွန်တော်ပြောဖူးသလိုဘဲ၊ အရင်ဆုံးပေါက်တဲ့ကြီးသွား..အရင်ဆုံးပိုးစားရတယ်..ဆိုတာအမှန်ပါဘဲ။ အသက် ၆-၇နှစ်အရွယ်မှာစပေါက်တဲ့ ကြီးသွားအံသွားတွေဟာ၊ ပိုးစားအများဆုံး၊အနှုတ်ရခံဆုံး၊ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သွားပြန်စိုက်ရဆုံးသွားဖြစ်ပါတယ်။ အံသွားတွေပိုးစားရင်များသောအားဖြင့် အစာဝါးတဲ့မျက်နှာပြင် (occlusal surface) ကစပြီးစားခံရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လို့ထင်ပါသလဲ။ ဒီပုံကိုကြည့်ရင်အဖြေရပါလိမ့်မယ်။
အံသွားတိုင်းရဲ့ဝါးတဲ့မျက်နှာပြင်မှာသဘာဝကပေးထားတဲ့ ချိုင့်တွေ (pits) မြောင်းတွေ (fissures) ပါနေပါတယ်။ အစာစားပြီးတဲ့နောက်၊ အစာကြွင်းကျန်တွေက ဒီသဘာဝချိုင့်မြောင်းတွေထဲမှာ ကျန်နေခဲ့ပြီး မသန့်ရှင်းမဖယ်ရှားဘဲအချိန်ကြာသွားရင်၊ ပိုးမွှားတွေလာခိုအောင်း၊ ပွားများ၊ အစာချက်ကြပြီး၊ အက်စစ်ဓာတ်တွေထုတ်ကြလို့၊ ဒီနေရာတွေကိုပိုးစစားပါတော့တယ်။
(၀ါးဖန်များတဲ့လူကြီးတွေကတော့ အံတိုနေပြီ..ဆိုသလိုဘဲ သွားသားတွေကပွတ်တိုက်ဖန်များလာလို့ နိမ့်ကျသွားတဲ့အတွက် ဒီချိုင့်တွေမြောင်းတွေကသိပ်မထင်ရှားတော့ပါဘူး။ လူကြီးတွေကျတော့ သွားခြင်းသွားဘေးတိုက်ပွတ်တိုက်ဖန်များတာရယ်၊ သွားဖုံးသားနိမ့်လာတာရယ်ကြောင့်၊ သွားကြားမှာအစာတွေညပ်ပြီး၊ ပုံမှန်သွားကြားထိုးကြိုးနဲ့သုံးပြီး မဖယ်ရှားနိုင်ရင်၊ သွားနှစ်ချေုာင်းကြားကစပြီးပိုးစားတာများပါတယ်။)
ဒီလိုငယ်စဉ်ကတည်းကကြီးသွားတွေသွားပိုးစားတာ၊ စောစောစီးစီးနှုတ်ခံရတာ၊ ငွေအကုန်ခံပြီးပြန်စိုက်ရတာ၊ လူတစ်သက်စိုက်သွားတစ်သက်ခံရိုးထုံးစံမရှိလို့ ခဏခဏပြန်အသစ်လဲရတာ၊စိုက်သွားကိုအသစ်မလဲမိလို့ဘေးသွားတွေပိုးစားကုန်တာ..စတဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေကကြိုတင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းကတော့ ပိုးမစားခင် ကလေးဘ၀ကတည်းက ဒီကြီးသွားတွေရဲ့ချိုင့်တွေမြောင်းတွေကို၊ ပိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုချိုင့်တွေပေါ်ကို composite resin ဆိုတဲ့သွားဖာတဲ့ဆေးလေးကိုဖြည့်လိုက်ပြီး...
ရောင်ခြည်လေးစက္ကန့် ၂၀-၄၀ လောက်ပြလိုက်တာနဲ့မာသွားပါတယ်။ (ဒီအလင်းရောင်ခြည်က visible blue light ပါ။ မျက်လုံးနဲ့တိုက်ရိုက်မကြည့်ရင်ဘာအန္တရာယ်မှမရှိပါဘူး။ ဆေးကိုအပျော့အခြေအနေမှာ ကိုယ်လိုသလိုပုံဖော်ဖြည့်သိပ်ပြီးမှ၊ ရောင်ခြည်ပြလိုက်ရင်၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့လှိုင်းအလျားရှိတဲ့အလင်းရောင်ထိရင်မာခဲသွားစေတဲ့ဓာတ်ထည့်ထားတဲ့အတွက်မာသွားတာဖြစ်ပါတယ်)ချိုင့်မြောင်းမရှိတဲ့သွားမျက်နှာပြင်ဖြစ်သွားပါပြီ။
ဒီကြိုတင်ကာကွယ်သွားဖာခြင်းကို Pits and fissure sealant - ချိုင့်မြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ အစာခိုစရာနေရာမရှိတော့တာရယ်၊ ဖာတဲ့ဆေးထဲမှာ သွားပိုးစားတာကာကွယ်တဲ့ဖလိုရိုက်ဓာတ်ထည့်ထားပြီး၊ နည်းနည်းချင်း၊ တစိမ့်စိမ့်ဖလိုရိုက်ဓာတ်ကိုသွားပေါ်ထုတ်လွှတ်ပေးနေတာရယ်ကြောင့်၊ သွားပိုးစားရောဂါကို၊ နှစ်တွေအတော်ကြာတဲ့အထိအကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတုန်းကတော့ ဆေးခန်းလာပြတဲ့ကလေးမိဘတော်တော်များများကိုရှင်းပြပြီး၊ လုပ်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
Posted by Dr. Nyan at 9:00 PM
How about me, sayar? I am 37years old. Can I also have it?
Oh, you are also 71- born! Of course, Ko Wai Toe. If there are some teeth still presenting with deep pits and fissures, they can be sealed for prevention. However, at this age, interproximal caries between two teeth becomes more common. Now I have to use dental flosses to remove food debris between molars as food impaction between teeth is becoming more frequent for me. I will write about interproximal cleaning in posts later.